Maxkamad Soomaali ah oo sii deeysay gabadhii la sheegay in la kufsaday saxafigiina xabsiga ku sii heysay - Sabahionline.com
Maxkmadda racfaanka Soomaaliya ayaa Axaddii (3-dii Maarso) waxa ay dambiyadii ka ridday haweeneey lagu xukumay hal sano kadib markii ay saxafi u sheegtay in ay kufsadeen askar ka tirsan ciidanka ammaanka, laakiin saxafigu waa uu sii xirnaan doonaa, sidaana waxa sheegay AFP.
Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim oo horyimid maxkamadda si uu racfaan uga qaato xukunkiisii 20-kii Febraayo. [Abdi Said/Sabahi]
Ururro u dooda xuquuqda aadanaha oo ku baaqay in si degdeg loo sii daayo saxafiga Soomaaliga ah
Xuquuqiyiin u ololeeynaya sii deeynta saxafi Soomaaliyeed oo wariyay xaalad kufsi
Xukuumadda Soomaaliya oo xirtay saxafi canbaareeyay hannaankii ay u dhacday maxkamadda 'dacwaddii kufsiga'
"Maxkmaddu waxa ay amartay in la sii daayo haweeneeyda, halka uu saxafigu uu lix bilood xirnaan doono taasoo oo uu ku muteeystay in uu ku xad-gudbay hay'adaha dawliga ah," ayuu yiri Garsoore Xasan Maxamed Cali. "Maxkamaddu waxa ay ogaatay in wariyuhu uu marin habaabiyay haweeneeyda la sheegay in la kufsaday markii uu waraysanayay."
Bishii hore, Luul Cali Cismaan, iyo saxafi Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim oo 25-jir ah, ayaa lagu helay in ay yihiin dambiilayaal kadib markii ay ku xad-gudbeen hay'adaha dawliga ah. Ibraahima yaa sidoo kale lagu helay in uu galay dambi ah "in uu qaaday waraysi been ah, iyo in uu galay guri qof dumar ah oo uunan joogin ninkii lahaa".
Luul, oo horay xabsigeeda dib loogu dhigay lix bilood si ay u soo nuujiso ilmaheeda inta ayan dib u bilaabin xabsigeeda, ayaa si buuxda xor u noqoneeysa kadib xukunka ka dhacay Muqdisho.
Laakiin Ibraahim ayaa isaga oo jeebaysan waxa lagu riday gaari waxaana loo qaaday xabsiga dhexe, taasoo xanaaq ka dhex abuurtay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo saaxibbadii.
Daniel Bekele, oo ah agaasimaha Afrika ee Hay'adda Ilaalinta Xuquuqda Aadanaha, ayaa dhalleeceeyay sii xirnaanshaha Ibraahim, oo xabsiga ku jiray tan iyo 10-kii Janaayo.
"Maxkamadda racfaanka waxa dhaafay fursad ay ku sixi kartay khalad aad u wayn, hadday ahaan lahayd saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda Soomaaliya," ayuu Bekele ku yiri hadal uu soo saaray. "Xukuumaddu waxa ay ku doodday in garsoorku ay tahay in uu iskii u shaqeeyo dacwaddan, laakiin tallaabo walba waa caddaaladdii waa loo diiday."